Iadaptha Shim, iAluminiyam iTolo, iBullet Shot-Kelu
Ukuzingela kunye nokutola
Izinto zokuhombisa ubucwebe
Uxinzelelo ukunciphisa Ukutya
MALUNGA NEKELU TECH
Qaphela i-excellet ductility kunye neplastiki kwimveliso ehambelana nokuqina kunye namandla. Zilungele iindawo ezahlukeneyo ezihlanganisiweyo.
Uyakwazi ukuvelisa izinto ezintsonkothileyo, uyilo oluntsonkothileyo olunokuthi lungafumaneki ngezinye iitekhnoloji. Ukusetyenziswa kwezixhobo: ukuya kuthi ga kwi-95% nangaphezulu.
Ukunyamezelwa kokulinganisa: ± 0.02mm Ukunyamezeleka kobunzima: ± 0.2g Umphezulu wobunzima: 1 ~ 1.6um
Umthamo wenyanga i-1200kg ngosuku kunye neetoni ezingama-30 ngenyanga, nkqu nakwisixhobo esincinci. Imveliso, iindleko zabasebenzi ezisezantsi kunye nokucoceka okuphezulu ngaphezulu.
Ubunzima beTungsten Worm
Ubunzima beTungsten Drop Shot
TUNGSTEN PUNCH UBUNZIMA
Isinki seTungsten Cheburashka
I-Tungsten ejija i-chip
Ubunzima beTungsten Pagoda
TUNGSTEN LESikhumba Skin
TUNGSTEN BARREL UBunzima
Ubunzima beBhola yeTungsten
Isinki yedayimani yetungsten
ubunzima besiko le-tungsten
Ubunzima be-Nail / yePogoda
Ukuntywila kwebhola eSinker
ISIQENDU SINYE SOKUZINGELA IBHOADIYA
Ukuzingela kunye neArchery Ferrule
UKUTSHONA KWENKQUBO YENKQUBO
I-Brass ARROW INSERT
I-Screw Screw Ubunzima
TUNGSTEN IGOLF plug
I-GOLF TIP UBunzima
I-TUNGSTEN TIP UBUNGQINA
ICANDELO LESICWANGCISO SONYANGO
ifilimu yezilwanyana zasekhaya
Sebenzisa ubuchule be-MIM (Metal Injection Molding) ukuze kuveliswe izinto ezenziwe ngesinyithi ezenziwe ngeTungsten, Brass okanye ngeSinyithi engenasetyenziselwa ukuzingela ngokubanzi, isithiyelo kunye nokuloba, isixhobo segalufa, umphanda wedayari, amaso okudubula nokuloba , ukukhusela i-radiation kunye nezixhobo zonyango, izinto zobucwebe njalo njalo.
Ukwenza umatshini ngokukodwa okanye kunye nenkqubo ye-MIM ngokweemfuno zenkqubo, ezinje ngetolo, iferrule, unqamlezo olubanzi lokudubula iintolo kunye nezixhobo zokuzingela, indawo yentsimbi ye-archery kunye nedart accessory, iplagi yeadaptha yezixhobo zegalufa,
Phuhlisa isikhunta liqela lobunjineli leKELU elineminyaka engaphezu kweshumi libonisa. I-Spccilized in molds echanekileyo ehambelanayo, kubandakanywa i-injection mold kunye ne-sizing ifa iqela le-KELU qinisekisa ukuchaneka okungcono kunye neendleko eziphantsi kutyalo-mali lokubumba.
Iminqweno emihle kwiKELU ngonyaka we-2021
Namhlanje lusuku lokuqala lokusebenza lwango-2021. Kule meko, iqela le-KELU lithatha iminqweno yethu emihle kubo bonke abathengi bethu. Wonwabile 2021! Nyakhomtsha! Ndinqwenela ukuba ishishini lakho liphumelele ngakumbi ngo-2021! Ndinqwenela ukuba wena nosapho lwakho nibe sempilweni kwaye nonwabe ngo-2021! Ndinqwenela ukuba intsholongwane ihlale ikude kuwe nakubo bonke abantu o ...
I-Tungsten: Umphefumlo weShishini loMkhosi
Kwishishini lezomkhosi, i-tungsten kunye ne-alloys zayo zinqabile kakhulu kwizicwangciso-qhinga, ezibonisa ubukhulu becala amandla omkhosi welizwe. Ukuvelisa izixhobo zale mihla, ayinakwahlukaniswa nokusetyenzwa kwesinyithi. Ukulungiswa kwesinyithi, amashishini ezomkhosi kufuneka abene k ...
Buyintoni ubunzima bokuloba obutsha?
Kwimarike yaseTshayina yokuloba, izandi zokuloba azichaphazeli nayiphi na imetiyoli ye-alloy, kodwa eMntla Melika, i-tungsten sele ikhulile kwaye ithandwa njenge-alloy lure iminyaka. Izitshisi zokuloba zeTungsten ziqhelekile ukuba zisetyenziselwe iindlela zokuloba. Indlela yokuloba yokuloba yaqala okokuqala eYurophu ...
Ukubaluleka kolawulo lobushushu kwi-MIM
Njengoko sisazi, ulawulo lobushushu sisitshixo esifunekayo sokuqhubekeka kwe-thermal, izixhobo ze-differnet zifuna unyango olwahlukileyo, kwaye kwanezinto ezifanayo ezinobunzima obahlukeneyo, ikwafuna ukuguqulwa kulungelelwaniso lobushushu. Ubushushu ayisiyiyo kuphela eyona nto ibalulekileyo kwi-thermal pr ...
Ukubuza malunga neemveliso zethu okanye pricelist,
UYA YAKHO INKQUBO YOKWABELA NGOKUGQIBELELEYO